Kitra-Alfa : Tsy ravan’ny AS Adema ny « barazin’ny miaramila »
Tsy tafavoaka teo anatrehan’ny « barazin’ny miaramila » ny AS Adema, omaly tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina.
Tamin’ny alalan’ny isa 1 no ho 0, baolina nampidirin’i Mahenga teo amin’ny minitra faha-25, no nivoahan’ny Cosfa ho mpandresy teo amin’ity lalao miverina ity. Tamin’ny lalao mandroso dia nisaraka ady sahala samy tsy nitoko ny roa tonta teny Carion.
Tsy nahatafavoaka ny fahaizany niaraka tamin’ity ireto ekipan’ny seranam-piaramanidina ity. Ny miaramila rahateo nanana ny ekipan’i Nirina Andrinajoelison na Raniry.
Tamin’ny lalao faharoa dia tsy naharaka ny herijikan’ny Iarivo Football Club ny Vesta. Isa 1 no ho 0 ihany koa no nisarahana teto, rehefa nanao ady sahala tamin’ny lalao mandroso. Mbola 1 no ho 0 koa ny fihaonan’ny Ajesaia sy Dartline.
Mbola mitarika izany hatreto ny Japn Actuel’s.